Kirasi yekukosora nedoro: Unogona here kunwa kana uri kutora sosi yekukosora? - Dzidzo Yehutano | Chikunguru 2021
Hutano Dzidzo, Hutano Checkout Nharaunda Nhau Wellness Kambani, Nhau Nharaunda, Wellness Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Kambani Info Info, Nhau Dhinda Info Info, Hutano Dzidzo Nharaunda, Kambani Nhau, Wellness Zvinodhaka Info
Kuru >> Dzidzo Yehutano >> Unogona here kunwa doro kana uri kutora sosi yekukosora?
Unogona here kunwa doro kana uri kutora sosi yekukosora?
Hutano Dzidzo Iyo Kusanganisa-Up
Kukosora kunogona kuve chero chinhu kubva pakushatirwa kudiki kusvika mukusuwa kwakanyanya, kuchikuchengetedza maawa ese ehusiku . Paunenge uchitonhora nechirwere kukosora , iwe unogona kusvika kune bhodhoro re over-the-counter (OTC) chikosoro sirasi. Kana iwe ukaona chiremba wako nezvehurwere hwako, iye kana iye angatopa kurairirwa kwakasimba kwekukosora.
Saka, ko kana iwe uchida kunakidzwa negirazi rewaini nedinner kana doro panguva yemutambo wenhabvu? Unogona here kusanganisa sirasi yekukosora nedoro?
Nehurombo, doro uye chikosoro manyuchi haasanganisi. Kubatanidza sosi yekukosora nedoro zvinogona kutungamira mukuzara uye kukotsira uye kukanganisa kubatana kwako uye kutyaira. Mimwe mishonga yekukosora ine doro futi, saka mhedzisiro inogona kutonyanya kutonyanya. Ramba uchiverenga kuti udzidze zvakawanda nezve kudyidzana pakati peyakajairika chikosoro manyuchi nedoro.
Kazhinji kukosora manyuchi uye zvigadzirwa zvavo
Kutanga, ngativhurei zvimwe zvakajairika pamusoro pe-the-counter (OTC) uye mushonga mishonga yekukosora nemidziyo yavo inoderedza kukosora.
Robitussin DM , Tussin DM (ine guaifenesin, expectorant, uye dextromethorphan, inodzvinyirira kukosora)
Delsym (ine dextromethorphan)
NyQuil manyuchi (ine dextromethorphan pamwe nezvimwe zvinongedzo)
DayQuil manyuchi (ine dextromethorphan pamwe nezvimwe zvinongedzo)
Mucinex-DM mvura (ine guaifenesin uye dextromethorphan)
Ongorora: Mamwe akawanda chikosoro uye kutonhora kugadzirira (mupiritsi kana sirasi fomu) zvakare ine dextromethorphan, senge NyQuil Liquicaps, DayQuil Liquicaps, Robitussin chikosoro gels, uye Mucinex-DM mapiritsi .
Phenergan DM (ine promethazine uye dextromethorphan)
Phenergan ine codeine (ine promethazine uye codeine)
Robitussin AC (ine guaifenesin uye codeine)
Tussionex (ine chlorpheniramine uye hydrocodone)
Sezvauri kuona pamusoro, izvo zvinowanzojairika zvekukosora zviri dextromethorphan uye codeine .
Unogona here kusanganisa dextromethorphan nedoro?
Chii chinoitika kana iwe uri kutora OTC kana mushonga wekukosora mushonga une iyo yekudzvinyirira inodzvinyirira dextromethorphan-iwe unogona kusanganisa iyo Robitussin-DM nedoro? Kana Delsym nedoro? Kana chero chimwe chigadzirwa chine dextromethorphan nedoro?
kwete . Kunyangwe iwe uchigona kuwana zviri nyore zvigadzirwa zvine dextromethorphan OTC, iyi mishonga inogona kuva nenjodzi huru kana ikasanganiswa nedoro.
Nei zvakadaro? Huye, dextromethorphan nedoro zvese zviri zviviri zvepakati tsinga system (CNS) zvinoshungurudza, zvinoreva kuti zvinokonzeresa kuzorora, kurara, uye kunzwa kwekufara. Dextromethorphan, pachayo, mushonga unoshungurudzwa zvakanyanya. Uye kusanganisa dextromethorphan uye doro zvinokonzeresa mhedzisiro, izvo zvinogona kuwedzera njodzi yekuwedzeredza. Mimwe mhedzisiro kusanganiswa uku kunogona kukonzera kusanganisira:
mushonga wakanakisa wekubvisa chikosoro
Kufuridzira kushushikana (kunonoka kufema)
Zvironda zvehuropi izvo zvinogona kukonzera ndangariro uye hunhu matambudziko
Ko zvakadii guaifenesin?
Guaifenesin is expectorant, iyo inobatsira kusunungura mamina. Vanhu vazhinji vanoshandisa uyu mushonga kubatsira kupaza phlegmy chikosoro. Guaifenesin inowanikwa muzvigadzirwa zveOTC zvakaita seMucinex kana plain Robitussin (kwete Mucinex-DM kana Robitussin-DM-iyo DM inomirira dextromethorphan mune zvigadzirwa izvi). Mimwe mishonga yemishonga, yakadai saRobitussin ine codeine, zvakare ine guaifenesin.
Kunyangwe guaifenesin nehunyanzvi isingabatanidze nedoro, zvichiri nani kusvetuka doro uchirwara. Doro rinogona kukonzera zviratidzo zvechirwere (uye mhedzisiro yemishonga yako) kuwedzera. Doro rinogonawo kukuita kuti uve nemvura uye kushayisa simba immune system yako.
Unogona here kusanganisa codeine yekukosora manyuchi nedoro?
Ngatitii kukosora kwako kwakanyanya zvekuti wakasvetuka nzira yeOTC ndokunanga kuna chiremba wako, uyo akaraira mushonga wekukosora une hydrocodone kana kodhi. Unogona here kusanganisa hydrocodone kana codeine yekukosora manyuchi nedoro?
Narcotic mishonga yakadai sehydrocodone kana codeine ine nhema bhokisi yambiro , inova yambiro yakasimba inodiwa neUnited States Food and Drug Administration (FDA). Iyi mishonga ine mukana wepamusoro we kushungurudzwa uye kuvimba pazvinotorwa zvega, zvichitungamira pakuwedzeredza uye kufa. Kosora manyuchi ane narcotic ari zvinhu zvinodzorwa uye inofanirwa kupihwa sarudzo kune vakanyatso kuongororwa vanhu vakuru uko mabhenefiti anokunda njodzi. Kana ikatorwa yega, aya macodeine-ane chikosoro manyuchi anogona zvakare kutungamira mukukuvadza, kutyisidzira hupenyu, kana kuuraya mweya wekufema.
Zvino, wedzera doro? Ndiyo huru kwete. Vagadziri vezvikosoro izvi vanonyevera (zvakare mubhokisi dema rekuyambira) kuti kusanganisa maopioid senge codeine kana hydrocodone nedoro kunogona kukonzera kudzikama kwakanyanya, kufema kwekufema, koma uye kufa. Hydrocodone- kana kodhi-ine sosi yekukosora pamwe nedoro zvakaenzana mushonga wedambudziko.
Zvakare, mamwe maOTC nemishonga yekurapa yekukosora, kuwedzera kune yavo yekukosora inodzvinyirira zvigadzirwa, ine shoma shoma yedoro. Saka ikozvino unenge uchibatanidza zvese zvinokonzeresa zvemishonga nedoro uye nekuwedzera doro.
Ndeapi masosi ekukosora ane doro?
Iyi chati , Yakagadzirwa neMedical Society yeHurumende yeNew York, ine rondedzero yakazara yemishonga ine doro nemishonga isina doro.
Zvimwe zvinowanzoitika zvekukosora manyuchi zvine doro zvinosanganisira mamwe mafomati eNyQuil, ZzzQuil, uye imwe yekukosora kwehusiku kana kukosora / kutonhora manyoro, pakati pevamwe
Ndeapi masiriri ekukosora asina doro?
Zvirinani, sarudza dhizaini-isina dhizaini. Mazhinji mafamasi anotakura mashoma mashoma emhando dzisina doro rekukosora doro, senge isina doro Tussin-DM kana Yakachengeteka-Tussin DM . Kana iwe uchida kudzivirira doro mugirazi rako uye mushonga wako, sarudza imwe yesarudzo idzi.
Nekudaro, sezvo mafomati anogona kuchinja pamusoro pemakore, zvine hungwaru kutarisa chinyorwa nemushambadzi wako kana uchisarudza OTC mushonga wekukosora kuti uve nechokwadi chekuti hapana doro muchigadzirwa.
Kana ndikanwa doro, chii chandingatora kuti ndirape chikosoro changu?
Nhau dzakaipa: Zviri nani kudzivirira doro kwemazuva mashoma kusvikira iwe unzwe zvirinani. Mazhinji mishonga yekukosora nedoro zvine mukana wekubatana, uye kumwe kudyidzana kunogona kuuraya.
Nhau dzakanaka: Unogona kupora nekukurumidza kana ukasanwa paunenge uchirwara. Doro rinogona kukanganisa kurara kwako, uye kana uchinge uchirwara, unoda ma z ako. Doro rakawandisa rinogona kushanda zvichipesana ne immune system yako.
Saka, dzivisa doro uye tora mushonga wako wekukosora. Kana, kana iwe uchiziva kuti unenge uchinwa doro, edza dzimwe nzira dzisina zvinodhaka dzekurapa chikosoro chako. Chipunu cheuchi, mamwe madonhwe asina kukosheswa ekukosora, a humidifier kana vaporizer, uye mvura zhinji inogona kungoita.
Paunenge uchipora kubva pakurwara uye kutora chikosoro sirasi, svetuka doro. Iwe unenge uine yakawanda nguva yekupemberera kana iwe uchinzwa zvirinani.
Ko statins uye doro kunwa musanganiswa?
Ndeapi mapoka ari panjodzi huru yekukanganiswa nefuruu?
unogona here kutora chirongwa b nekukurumidza mushure
unoziva sei kana uri lactose
ndekupi kwandingaende kunoona chiremba ndisina inishuwarenzi
ndeipi mishonga keflex inoshandiswa
kushanya kwachiremba kunoda marii
ndatora nguva yakareba sei ndotora zantac
nzira yekuwana mapiritsi ekuronga mhuri pasina inishuwarenzi